ပြောင်းရွေ့ဖြစ်ဖို့ရှိတဲ့ ပေါ့ဘာတောင် အသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုဖို့ ထက်သန်လာရတဲ့အဖြစ်…. – Sport Gaber
ပြောင်းရွေ့ဖြစ်ဖို့ရှိတဲ့ ပေါ့ဘာတောင် အသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုဖို့ ထက်သန်လာရတဲ့အဖြစ်….
ပရီးမီးယားလိဂ် အင်အားကြီးကလပ် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ ပြင်သစ်အသင်းတို့ရဲ့ အဓိက ကွင်းလယ်လူ ပေါလ်ပေါ့ဘာဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ယခုနှစ် နွေဈေးကွက် အတွင်းမှာ အသင်းရဲ့ ဂန္တဝင် ကစားသမား တဦး ဖြစ်သူ ရိုနယ်ဒိုကို ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့မှုအပေါ် ကျေနပ် အားရမှု ရှိတာကြောင့် အသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုဖို့ ပြန်လည် စဉ်းစားနေကြောင်း သိရပါတယ်။
အသက် ၂၈နှစ် အရွယ် ပြင်သစ်လက်ရွေးစင် ကွင်းလယ်လူ ပေါလ်ပေါ့ဘာဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း ၁နှစ်သာ ကျန်တော့တဲ့ ကစားသမား တဦး ဖြစ်ပြီး မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ သူ့ကို စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီထဲက အရှိန်အဟုန်မြှင့် ကြိုးပမ်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပေါ့ဘာဟာ ဘောလုံးသမား တဦး အတွက် ခြေစွမ်းအမြင့်မားဆုံး အသက်အရွယ်ကို ရောက်ရှိနေသလို ယခု ချုပ်ဆိုမယ့် စာချုပ်ဟာ သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝ နောက်ဆုံး ချုပ်ဆိုရမယ့် ကာလရှည် စာချုပ်တရပ် ဖြစ်တာကြောင့် စာချုပ်ကိစ္စအပေါ် အချိန်ယူ စဉ်းစားနေပြီး ယခုနှစ် နွေဈေးကွက် မပိတ်သိမ်းမီအထိ အသင်းပြောင်းမယ့် သတင်းတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထွက်ပေါ်ခဲ့သူပါ။
ဒါပေမယ့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ အတွင်းမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ကစားသမား သုံးဦးလို့ ဆိုရမယ့် ဆန်ချို ၊ ဗာရန်းနဲ့ ရိုနယ်ဒိုတို့အား ခေါ်ယူကာ အသင်းကို အားဖြည့်ခဲ့ပြီးနောက် ပေါ့ဘာက မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ သူ လိုချင်တဲ့ ဆုဖလားတွေကို စိန်ခေါ်နိုင်စွမ်း ရှိနေပြီလို့ ယူဆလာခဲ့ပါတယ်။
မန်ချက်စတာ ညနေခင်းသတင်းဌာန ကတော့ ပေါ့ဘာဟာ အသင်းထံ တကျော့ပြန် ပြန်လည် ရောက်ရှိလာတဲ့ အသင်းရဲ့ ဂန္တဝင် ကစားသမား ရိုနယ်ဒိုနဲ့ တွဲကစားနေရတဲ့ အပေါ် အတော်လေး ကျေနပ် ပျော်ရွှင်နေပြီး ရိုနယ်ဒိုကြောင့်ပဲ အသင်းမှာ ဆက်နေဖို့ စဉ်းစားနေတာ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြသွားပါတယ်။
နာမည်ကြီး သတင်းဌာန တခု ဖြစ်တဲ့ The Athletic သတင်းဌာနရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ပေါ့ဘာဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းက နယူးကာဆယ်အသင်းကို ၄-၁ ဆိုတဲ့ ရလဒ်နဲ့ ဂိုးပြတ် အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် အသင်းဟာ ဆုဖလားတွေကို စိန်ခေါ်နိုင်စွမ်း ရှိကြောင်း လက်ခံလာသလို အသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုဖို့ စိတ်အားထက်သန် လာပြီး မကြာခင်မှာပဲ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုနိုင်ဖွယ် ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
အသည်းခွဲဂိုးနဲ့မှ ယူနိုက်တတ်အသင်းကို အနိုင်ယူပြခဲ့တဲ့ – ယန်းဘွိုင်း
FIFA 22 အတွက် Rating အမြင့်ဆုံး ကစားသမားစာရင်းမှာ တတိယနေရာရောက်ရှိခဲ့တဲ့ – ရော်နယ်ဒို